Kennel biby, Mijanona eo am-bavahady, Paositra - Orinasa SD
Niorina tamin'ny taona 1996, Shijiazhuang SD Company Ltd. ("Orinasa SD") dia niasa tamin'ny varotra sy ny orinasa mpamokatra entana nandritra ny 20 taona ary ankehitriny dia manana mpiasa 12 ao amin'ny biraon'ny foibe any Shijiazhuang sy mpiasa maherin'ny 200 ao amin'ireo ozinina ao Hebei Faritany, Sina tanibe.
Fahaiza-manao R & D matanjaka sy ekipa teknika efa za-draharaha.
Niorina tamin'ny 1997, ny orinasa dia famokarana matihanina sy fikarakarana orinasa 20 taona ny famolavolana sy ny fanamboarana fenders fingotra isan-karazany
ISRAEL Y FAST POST
AMERIKANINA F FIORANANA POST-NIANATRA T PENT POST
Sina mba hampihenana bebe kokoa ny dian-karbaona vy
Hivoaka miaraka amin'ny drafitra hetsika i Shina atsy ho atsy mba hampihena bebe kokoa ny dian-tongotry ny indostrian'ny vy ao amin'ny firenena, hoy ny fikambanan'ny indostrian'ny orinasa ambony tamin'ny Alarobia. Raha ny filazan'ny Fikambanan'ny vy sy vy any Sina dia nifindra izany rehefa avy nivoady ny firenena ...
Asa efa nahavita be 3.200 tany Scunthorpe, Skinningrove ary any Teesside no voaaro amin'ny fahavitan'ny fifanarahana hivarotana ny British Steel amin'ny Jingye Group mpanao vy any China, nankasitrahan'ny governemanta androany. Ny varotra dia manaraka ny adihevitra marobe eo amin'ny governemanta, ny Ofisialy Re ...
Orinasa roa no nanandrana ny fampiasana hidrogen hamindroana vy amin'ny toerana iray any Suède, hetsika izay mety hanampy amin'ny fampiorenana maharitra ny indostria. Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, Ovako, izay manampahaizana manokana amin'ny famokarana karazana vy manokana antsoina hoe vy enjeniera, dia nilaza fa niara-niasa tamin'ny L ...